Mugovera, 20 Ndira 2018
Mashoko Ane Rutendo
"Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Mumwe nomumwe unoti kugomo iri: Simudzwa, ukandwe mugungwa, asinganyunyuti mumoyo make, asi achitenda kuti zvaanoreva zvichaitika, uchava nazvo" (Marko 11:23).
2 VaKorinte 4:13 inotaura ichiti, "Zvino zvatine mweya iwoyu wokutenda, sezvazvakanyorwa zvichinzi: Ndakatenda, saka ndakataura; Nesuvo tinotenda, saka tinotauravo". Isu tinotaura mashoko ane rutendo. Tine rutendo. Rutendo urwu isimba. Ndiro simba rinokunda nyika. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna 1 Johane 5:4. Mashoko atinotaura anoratidza kuti tinotenda Shoko raMwari. Mashoko aya ndiwo atinoshandisa kuronga zvinoitika munyika. Ndiwo atinoshandisa kutonga nyika. Ndiwo atinoshandisa kutonga zvinhu zvehupenyu huno.
Kuda iwe uri mwana waMwari. Izvi zvinoreva kuti haugoni kukurirwa. Wakatoshambadzwa semukundi. Wakatokunda ukapedza. Chigara uchitaura mashoko azere nerutendo. Ndiko kuti usakurirwa zvekare. Rutendo runovonekwa mumashoko atinotaura. Mashoko ako ndiwo anobudisa zvauri chaizvo. Ndiwo anounza zvinhu zvinoitika kuhupenyu hwako. Ndiko kusaka uchifanira kutaura zvinhu zvakafanira kutaurwa. Taura mashoko ane rutendo.
Hauchafaniri kutya Satani. Haachina simba rekukanganisa kubudirira kwako. Satani akakurirwa. Akakurirwa kare. Izvi ndizvo zvatinotaurirwa naJesu. Tinoverenga mashoko avo muna Ruka 10:18-19. Ndima iyi inotaura ichiti, "... Ndakavona Satani achiwa kudenga semheni, Tarirai, ndakakupai simba rokutsika pamusoro pesimba renyoka nezvinyavada, napamusoro pesimba rose romuvengi; hakune chinhu chingatongokukuvadzai". VaKorose 2:15 inotauravo nezvekukundwa kwaSatani uku. Inokutaura zvakajeka chose. Inoti, "Akaparadza vabati namasimba, akavabudisa pachena, akavakunda mauri".
Kristu vane hupenyu hwavakatipa. Hupenyu uhu ndehwekugara tichikunda. Ndehwekutonga zvinhu zvenyika ino. Asi unogona kunge usiri kukunda nenzira iyi. Haufaniri kuchema. Haufaniri kugunun'una. Ndiwe wava kufanira kutonga. Ndiwe wava kufanira kukurira zvinhu zvehupenyu huno. Ndiwe anofanira kushanduka. Taura mashoko ane rutendo. Dambudziko racho rinogona kunge riri kubasa kwako. Rinogona kunge riri mumari dzako. Rinogona kunge riri mumhuri yako. Izvozvo hazvina basa. Usabvuma kukurirwa. Taura kuti wakakunda.
Une maropafadzo. Maropafadzo aya ari mumuromo mako. Saka usachemedzwa nedambudziko iri. Taura kwariri. Raira kuti zvinhu zvigadzirike. Taura kudai muzita raJesu. Zvinhu izvi zvinozogadzirisika. Mwari ngavapiwe mbiri yose!
Ini handisi wenyika ino. Saka zvinhu zvenyika ino hazvigoni kundikanganisa. Ndine ropa raMwari. Izvi ndizvo zvandinonzwisisa. Vanhu vane ropa iri havagoni kukurirwa. Havagoni kuparadzwa. Ndinogara ndichikunda. Ndinogara ndiine hutano hwakanaka. Ndinogara ndichitonga. Ndinogara mukururama. Shoko rerutendo riri mumoyo mangu. Riri mumuromo mangu zvekare. Shoko iri riri kukurira zvehupenyu huno. Muzita raJesu.
1 Timotio 6:12
(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )21